I-500W i-PSU yemithwalo yaselwandle - I-Ocean-Components.com
IkhayaIindabaI-500W i-PSU yemithwalo yaselwandle
Inombolo yomnxeba:+00 852-3050 6772
Ifeksi:+00 852-3050 6774
Idilesi:I-Room 2102, Connaught Commercial Building, 185 Wan Chai Rd, Wan Chai, Hong Kong
Ixhaswe ngumboniso osasaziweyo wama-24V osasaziweyo (18 ukuya kwi-36V ububanzi) I-ENMA500D24 / 2 × 27-CC ibonelela ngeziphumo ezibini ze-27Vdc 20A.
IDroop ukuya kwi-10V yee-10s inakho ukuhlaliswa, kwaye ukusebenza ngokufanelekileyo kuyi- 85%.
Xa ukungafuneki kwakhona kungafuneki kodwa isicelo sifuna iziphumo ezimbini ezizimeleyo, i-540W inokwahlulwa phakathi kokuphuma kwe-27V kuyo nayiphi na imilinganiselo.
Ukukhuselwa kokungena kwe-polarity reverse, ukukhutshwa okujikelezayo okufutshane, ubushushu obungaphezulu, amandla ombane nangaphezulu kuyabandakanywa, kwaye kuyilwe ngokwe-EN60068-2-x kwaye kuhambelana nomgangatho wokhuseleko we-EN 60950.
Ukutywinwa kwityala le-IP56 lokumelana noxinzelelo oluphezulu kunye nokuxinana kwamanzi, i-PSU ine-heatsink zangaphandle zotshintshiselwano olunamandla phakathi kwezinto zangaphakathi kunye nendawo engaphandle.
"Iinqanawa kunye neenqanawa zigcwele izixhobo zombane neze-elektroniki ezifuna amandla ombane akhuselekileyo," yatsho iBhokisi yamandla. "Nangona izicelo ezininzi zinokuxhotyiswa ngezinto eziqinisekisiweyo zorhwebo zaselwandle eselfini, ezinye zichanekile, zifuna izisombululo zamandla ezizodwa ezenzelwe ukudibanisa isicelo sokugqibela."
I-servo motors esetyenziselwa ukusebenzisa 'ii-valves ezikhawulezayo' ukulungiselela iinjongo zokhuseleko kwimibhobho yenaliti ye-ipetroli, abaxhasi abanokulungelelana kunye nolawulo lwe-injini zezinye zezicelo inkampani ezijolise kuzo, zisithi: "Njengokusilela asiyondlela kulolo hlobo yezixhobo, abavelisi bevalve abakhawulezayo bakholisa ukusebenzisa izixhobo ezimbini ezizimeleyo ukuqinisekisa ukungafuneki. Nangona kunjalo, ukuthathela ingqalelo izixhobo kufakelwe kwindawo ebumbeneyo kwaye ingekho mgangathweni, oku kunokuba ngumceli mngeni kumfaki. "